Tadiom-pitiavana | 10
Latsa-dranomaso i Hery, ny tanany manindritsindry ny tratran’i Mihary mafy dia mafy, averiny indray ny fanohofana ny vavany, nataony izay fara-heriny.
Ny olona tonga miha-maro hatrany mijery azy. Izy mitabataba miantsoantso:
- “Mihary ! Mihary ! Fa maninona ianao no manao toy izao?”
Nopotsipotseriny, nohozongozoniny, nareniny dia nampatoriany indray.
Zara raha mitempo ny fony, ny masony nosokafana efa manomboka milentika tratran’ny ranomasina, ny hatsiaka manenika ny vatany.
Nidradradradra nitomany i Hery. Mila ho lasa adala.
Nanenina fa kilalao no niheverany ny fitiavana nifanaovany tamin’i Mihary kanjo, noraisin’ity farany anatin’ny fo. Ny nenina tokoa tsy ao aloha hananatra fa ao aoriana handatsa. Nidaboka teo ambony fasika izy rehefa hitany fa tsy misy azony hatao intsony, ny ranomasony no nipatrapatraka, ary ny feony nidradradradra toy ny ankizy kely nilaozan-dreniny ireny.
Zavona tsy hita noanoa no manenika ny tontolony. Tsy misy hitany akory na dia ny roa metatra manoloana azy aza fa ny andalan-tohatra fotsiny no hitany eo ambany masony. Isaky ny mamindra izy dia tsy hita ny zana-tohatra nodiaviny teo, ary fotoana fohy monja dia nifanehitra tamin’ny varavarana lehibe izay nisokatra ho azy izy. Hazavàna misandratra no tazany, niditra, ary saha mahafinaritra mbola tsy fahitany no tazany mamirapiratra eo anoloany.
Nijery ny manodidina anefa izy fa toa tsy nisy olona, siotsiokam-boronkely mahafinaritra, andro tony dia tony, hanitra mahatamana no manenika ny tontolo. Ny ahitra maitso mavana aok’izany. Izao angamba no atao hoe: paradisa hoy izy. Namonjy nipetraka izy sady nandinika ny tontolo mahafinaritra loatra manodidina azy.
Tampoka, somary nisy rivotra nitsoka mafimafy avy ao aoriany. Nitodika izy, tadio arahin-drahona fotsy no nanoloana azy. Tao anatiny tao nisy olona iray manao akanjo fotsy manjopiaka hatreo amin’ny hatony ka hatreny am-paladihany. Lehilahy tsara bika, tsara tarehy, nitsiky taminy. Najanony ilay tadio dia nanolotra ny tanany izy hampitsangana an’i Mihary.
- “Tonga soa eto ianao ry Mihary,” hoy ilay lehilahy.
- “Manao ahoana ianao tompoko,” hoy i Mihary, “fa iza moa ianao ary aiza aho izao?”
- “Ity toerana ity dia tsy voafaritra hatramin’izao, olona vitsy dia vitsy monja no afaka mandalo eto. Izahay ihany no manafatra azy ireo. « FITIAVANA » no anarako. Afaka maka endrika maro aho. TADIO no nosafidiako ho anarako androany satria izay no mifandraika amin’ny tantaranao.
- “Tantarako inona moa tompoko?”
Nipe-tanana fotsiny izy dia nisy horonan-taratasy feno sary nasehony an’i Mihary, toa ny indray mipi-maso dia nandalo teo aminy avokoa ny tantaram-piainany rehetra, ary tapitra teo amin’i Hery niezaka nanavotra azy, mikiakiaka sy midradradradra manoloana ny vatany efa tsy mahatsiaro tena intsony.
Tampoka, nilatsaka tsy hita intsony ny nanoloana azy, tahaka ny teo amoron-tevana izy sy ilay olona miendrika anjely.
- “Mihary, voafetra ny fotoana anananao. Manome safidy anao aho, ary fotoana fohy no anaovanao izany.”
- “Itsy ambany itsy ny tany izay nokasainao hialàna, ary efa nilaozanao mihitsy raha ny tena marina. Manjaka ao ny faharatsiana sy ny hadalana, ny fahoriana sy ny alahelo. Misy ao ihany koa anefa ireo mitàna ny marina sy manao izay hahatsara ny fiainana. Noho ny fisian’ireo olom-bitsy miezaka ny hanatsara hatrany io tontolo io no mbola tsy nandravan’Andriamanitra azy.
Itsy amin’ny ilany itsy kosa ny fanaintainana mandrakizay, any no misy ny tomany sy ny fikotroha-nify. Tsy manan-tsafidy ankoatr’ireo ianao. Ary tadidio fa raha te-hiverina eny ambonin’ny tany ianao, dia misy iraka tsy maintsy ampanaovina anao. Iraka faran’izay sarotra anefa izany ka diniho tsara:
- “Te-hijanona eto aho, Tompoko” hoy i Mihary.
- “Tsia, tsy azonao atao izany!” tamin’izay dia nihazakazaka tahaka ny rivotra ny fihintsan’ilay paradisa teo ary hantsana amoron-tevana no nitoeran’i Mihary. Nojereny ny tao aoriany efa tsy misy intsony, ilay afobe no hany sisa nanodidina azy.
- “Efa ho tapitra ny fotoana, hiverina eny an-tany aho sa tsia?” hoy i Mihary miady saina mafy.
- “Hiverina aho tompoko!”
Nanao teha-tanana fotsiny ilay lehilahy dia nihevaheva teny amin’ny rivotra i Mihary, foana tsy nisy intsony ilay paradisa teo. Tahaka ny nanonofy izy.
- “Ity ny iraka hampanaoviko anao! Jereo i Hery, zaza tokana irery izy, tsy nahita ny rainy akory. Fahadisoako ny nanaisotra ny reniny teo aminy. Ianao no hirahiko hanova ny fiainany. Ovay ny toetrany ho hendry. Anjaranao ny manoro ny làlana tokony halehany. Mety ho mora ny fahitanao azy, nefa eny am-pandrasàna eny ianao no hahitanao ny hamafiny. Ary farany dia tsy azonao tantaraina na amin’iza na iza izao nitranga taminao izao fa hitarika fahafatesana tampoka ho anao izany, ary tsy handalo amin’ilay toerana teo intsony ianao fa tonga dia any amin’itsy afobe tsy mety maty itsy.”
Tampoka, natsindriny ny tratran’i Mihary ny fanondrony, tahaka ny nisy herin’aratra tampoka nandalo teo an-tratrany teo. Iny herin’aratra iny no nanosika azy hianjera ary avy hatrany dia nisidisidina nilatsaka niverina teto antany. Fotoana vitsy dia…
Tsy aritry i Hery intsony fa niverina teo ambonin’i Mihary indray izy! naveriny avokoa ny tsindritsindry teo amin’ny tratran’i Mihary, very fanatenana ny lehilahy, ny ranomasony mameno ny tavany. Hany heriny farany: nodarohany tamin’ny tanany roa ny tratran’i Mihary, nisy rano nivoaka teo amin’ny vavany, nikohoka tampoka i Mihary sady toa niezaka ny hiarina. Noraisin’i Hery ny lohany, nareniny sady notatazany avy ao amin’ny lamosiny. Nikohoka fanindroany i Mihary sady toa nanala ny rano mbola tany an-tendany. Nangovitra ny ratsam-batany rehetra. Nalain’i Hery ilay akanjo maina nentiny teo ary nisy ilay lehiben’ny hotely koa nitondra bodofotsy manify natafiny an’i Mihary.
Horakoraka ny an’ny rehetra. Nisy ny nitehatehaka. Hafaliana ny an’ny olona nanatrika.
Efa naharitra ho 7 minitra angamba ny fameloman’aina teo. Nahoraka eraky ny hotely ilay loza teo fa feno olona eraky ny sisin-dranomasina.
- “Mihary an ! aza mandao ahy ianao!” hoy i Hery;
Tsy nahateny mihitsy i Mihary, ny hatsiaka no tsapany nanenika ny vatany, ny fangirifirian’ny masony mbola tsy nahitàny na inona na inona, tahaka ny manako aminy ny tenin’ny olona fa feno rano ny sofiny. Tsapany fotsiny i Hery mamihina azy mafy ary nibata azy teo ambony filanjàna.
Angamba tsy nisy olona intsony tao amin’ny hotely fa dia nitanjozotra nanodidina an’i Mihary sy Hery avokoa izao karazan’olona rehetra izao. Efa tonga avokoa moa ny mpiala sasatra ka nahoraka eran’ny tanàna ity zava-nitranga. Ireny ny olona mitondra fanilo samihafa manaraka ny lalan-kely mitondra any amin’ny hotely.
Nampidirina tao an’efitra aloha i Mihary, nisy dokotera tonga koa teo ary fantany tsara i Mihary. Izy no nikarakara azy, ary tsy niala teo anilany mihitsy i Hery na dia iray minitra aza.
Afaka fotoana vitsy dia niditra tao an’efitra ny lehiben’ny hotely, nilaza tamin’i Hery fa efa vonona ny fiara hitondra an’i Mihary any amin’ny Hopitaly.
Nasain’ilay dokotera niomana i Hery, hisolo ny akanjony, ary hiaraka aminy any amin’ny hopitaly. Nihazakazaka aok’izany izy nankao amin’ny efitranony, nanamaina ny lohany sady nisolo akanjo hafa. Naka izay akanjo tokony hilain’i Mihary ihany koa ary vetivety dia niverina tao amin’ilay efitra mafana nisy an’i Mihary.
Minitra vitsivitsy taorian’izay, iny izy ireo niakatra ny làlana mankany amin’ny hopitaly tao Androva. Samy tsy nisy niteny anefa ny rehetra na dia hita taratra teny amin’ny endriky ny tsirairay aza ny hafaliana fa avotra ihany ihany ity tovovavy nanoloana azy ireo.
Fa inona marina ny olan-dRatrema tamin’izy tonga taty Antananarivo.
Rehefa vitan-dRatrema ny nijery ny antontan’isa marobe mikasika ny fampandehanana ny orinasany dia nampiantso ireo mpiara-miasa akaiky eo ambany fifehezany izy. Fanapahan-kevitra goavana tsy maintsy atao maika ny ifampidinihana.
Vory ireo tale rehetra, fotoana tsy nampoizina rahateo, samy nanao ny tatitra ny tsirairay, hita fa misy fahabangàna goavana eo anivon’ny orinasa, ny hetra anefa tsy maintsy aloha fa mety hitarika hatramin’ny fanakatonana ny orinasa ny tsy fandoavana izany. Very hevitra ny rehetra. Hindram-bola amin’ny banky, ny fananan’ny orinasa rehetra efa tapitra nanaovana antoka avokoa, ny petra-bola efa kely sisa no eo ampelan-tanana, nampian’ny fiantohana ny dian-dRatrema sy ny fianakaviany tany ampitan-dranomasina ihany koa.
Hany hevitra hita farany dia ny hiroso amin’ny findramam-bola hafa indray ary tsy maintsy ny tranon-dRatrema no natao antoka.
Nantsoina ny banky. Tsy nanaiky intsony anefa ry zareo satria efa tena idiran-trosa be loatra ny orinasa, ny varotra anefa toa tsy dia mandeha.
Nantsoiny avokoa ny olom-patany rehetra, nefa tsy sahy niditra satria efa olana goavana no mianjady amin-dRatrema. Tsy misy sahy hifanehitra amin’ity resaka Bianco efa mananontanina ity. Hany sisa heriny dia ny hivarotra ny fananany.
Te-hiala amin’izay resaka izay Ratrema nefa voatery. Raha tsy izany dia hitambesatra aminy avokoa ny fikatonan’ny orinasany efa nandaniany ny fiainany hatramin’ny fahatanorany. Hamidiny ary ny ranony eny Ivandry.
Io no hany sisa tsy nataony antoka na taiza na taiza.
Nantsoiny avy eo ilay olona efa nandrokiroky azy fotoana maromaro lasa izay amin’io tranony io fa nolaviny mafy satria mirakitra ny fiainany manontolo, ary tsy ny azy ihany fa na ny vady aman-janany koa aza. Somary latsa-dranomaso izy. Ny raharaha anefa tsy azony andrasana intsony;
Fotoana vitsivitsy taorian’izay dia tonga ilay olona efa nikasa mafy hividy ny tananan-dRatrema. Natao ny fifanarahana ary tsy maintsy tonga dia noraiketina maika satria ny fotoana efa isaina isan’ora fa mety hitarika hatramin’ny fanagadrana an-dRatrema mihitsy raha tsy mahita vola haingana dia haingana izy. Tsy vitany akory aza ny nanontany izay hevitry Malala sy Alexia fa tonga dia fanapahan-kevitra tsy azony idivirana intsony no norasiny. Latsa-dranomaso indray ny ranomasony ary dia tena onena azy ilay olona hividy ny tranony.
- “Tsy mampaninona,” hoy ilay mpividy, “fa mbola azonao hipetrahana mandritra ny telo volana aloha ny trano.”
- “Aza mbola ampahafantarina izao aloha ny vady aman-janako fa mety tsy ho tantiny any an-tanin’olona any izao mitranga aty izao.” Dia nifanaraka tsara izy roalahy, sady olona mifanaja tsara rahateo moa, fa dia samy hitazona ny tsiambaratelo na dia amin’ny mpiasa faran’izay hitokisana indrindra aza.
Kivy Ratrema, ny tanànany izay tsy foiny indrindra, ary tsy nanaovany antoka na taiza na taiza no voatery hamidiny amin’ny fotoana tsy azony nanoharana.
Izay tokoa ilay manao afera. Mivadibadika. Indraindray avo, indraindray iva. Boribory tokoa ny tany, ny ambony mety ho ambany, ny ambany mety ho lasa ambony. Tsy hitany intsony izay hotenenina, fa dia niady mafy ny sainy ambara-pahatongany tao an-tranony izay tsy maintsy hilaozany afaka volana vitsy ihany.
Hataoko ahoana ny hampilaza izao amin’i Malala, sy Alexia ? hoy izy niady saina samy irery teo.
Fa tany Mahajanga:
Ilay fahatairany teo no nampiarina an’i Mihary, nitsangana izy, nisintona ilay lamba manify teo ary natafiny ny vatany efa somary tera-tsemboka. Lasa niala teo namonjy ny efitra fandroana.
Nipetraka teo ambonin’ny taila mangatsiaka tao izy ary nanomboka latsa-dranomaso. Nifokofoko, nitomany nigogogogo irery tao, nihodina taminy ny tany aman-danitra. Ny lohany no natohony teo ambony lohalika nisedra ny fitarainany. Fitarainana miharo fahadisoam-panantenana tsy roa aman-tany.
Tampoka nitsangana izy nandray ny akanjony ary nampiditra izany.
Reny fa nisy nandondona ny varavarana, fa tsy novaliany. I Hery io, ary tsy tiany ho hita intsony aza.
Novoahainy tampoka ny varavarana ary nihazakazaka izy nivoaka ny efitrano sy ny hotely. I Hery tsy sahy nivoaka akory fa silipy kely monja no teny aminy.
Lasa i Mihary, lasa nihazakazaka tsy tanan’iza na iza amin’ity andro alina efa maizimaizina.
Nikoropaka i Hery, zara raha mahafantatra ny tanànan’i Mahajanga i Mihary nefa lasa nivoaka tsy fantatra akory izay nalehany.
Nampidiriny ny akanjony, nivadika tao amin’ny efitranony izy nitady jiro fitsilovana sy akanjo mafàna ary nahatsiaro nenina tsy roa aman-tany ihany koa tamin’ilay teny nataony teo. Ny fony efa mitempotempo mafy, mila tsy arany intsony, izy natahotra fadiranovana amin’ny nalehan’i Mihary.
Nivoaka ny hotely izy, nanontany izay olona nifanena taminy raha nahita vehivavy nihazakazaka.
Ilay mpiambina ny vavahadin’ny hotely no nilaza fa nanaraka ny lalana nankany amoron-dranomasina ilay vehivavy teo… Tsy hitan’i Hery izay natao fa nihazakazaka ihany koa izy nanara-dia ny làlan’i Mihary.
Ny sainy tsy mitombina intsony. Nanahy ny afitsoky ny ho avy toa maizina tanteraka aminy.
- “Aza hitako ka hiafara amin’ny … aza hitako marina e ! Loza izany ! loza iray, loza roa fa ny valiny no tena loza. Aza hitako.” Hoy izy nitebiteby fatratra.
Efa mila ho sempotra i Hery vao tonga teny amoron-dranomasina. Toerana tsy dia lavitra akory ny misy ilay hotely nefa ny tahotra nameno ny sainy mila hanefika azy. Tora-pasika haolo tsy misy tamingan’olona intsony no hitany tsilovin’ny hazavan’ny volana. Ny fitopatopan’ny ranomasina no mba feo re teny amin’ny tora-pasika. Nojereny ny manodidina azy, tsy nisy na inona na inona. Lakana mihoaka no hany mba tazany, ny andro rahateo maizina ary ilay fanilo keliny no natsilotsilony ny onjan-drano sao dia hitany eny ihany i Mihary.
Tampoka, nisy lohan’olona tazany kely ery lavidavitra anaty rano ery, miroso amin’ny lalindalina hatrany. Nikoropaka i Hery, taitra sy natahotra, navelany tamin’ny tany izay teny an-tanany rehetra ary nihazakazaka izay tsy izy namonjy ilay olona efa niroboka lalina tao anaty ranomasina.
Loza ity, hoy izy tany an-tsainy tany, ny onjan-drano nampihisatra ny fihazakazahany nefa nanao ezaka tsy omby tratra izy nitady ilay olona efa ny volony sisa no nitsingevana anaty rano. Ny onja madinika koa nanositosika azy fa tratrany ihany ary nobedainy ary niezaka izy niverina moramora teny amoron-drano nisarika ilay olona tamin’ny sandriny.
Tsy fantatra intsony na iza na iza fa ny hamonjy aina no masaka tao an-tsainy. Ity hovonjena efa tsy mahatsiaro tena intsony, soa fa manam-batana tomady sy tena mahay milomano ity Hery ity fa raha tsy izany efa fefiky ny onja teo koa angamba.
Tonga teny amin’ny tora-pasika ihany izy ny farany. Fantany amin’izay fa i Mihary io novonjeny io, nefa Mihary efa tsy mahatsiaro tena intsony…
Loza inona ity ! Very aho marina ! Fa inona ity nataoko?
Indreny fa nisy olon-kafa tonga nahita azy ireo teo ambony fasika, norina ny tratran’i Mihary, natao daholo izay azo natao ! notohofana ny vavany saingy…
Vao avy niresaka naharitra tamin’i Tahiana i Malala, dia injao naneno ny famantarana fa nahazo hafatra ny findainy. Gagagaga ihany izy satria ny finday vaovao ka tsy mbola tokony hisy hahalala ny laharany. “ Niantso aho fa occupé. Antsoy aho raha mety. Tojo” izay no nisoratra teo. Niontana iray ihany ny fon’i Malala. Poatoa izay dia efa voatsindry ny laharana rehetra. Mbola nanontany naka toky tsara ny amin’i Mahefa ihany anefa i Tojo sao, hono manao tampody tampoka sady narahiny ny hoe:
- “Tsy nieritreritra ny ho avy intsony aho fa efa tara be, saingy toa nahatsiaro ny tsikinao sy ny hatsaram-bikanao aho dia tsy aritro dia naleoko niantso ihany.”
- “Aiiy! Tojo koa,” hoy i Malala mody nandà nefa sady nankasitraka.
- “Tena marina anie izany ry Malala e! mahafatifaty be ahy ianao saingy somary natahotra aho. Izao afaka ny tahotro sady tsy raharahiko e! Manina anao tanteraka aho.”
- “Tongava aty ahitako izany tsy mahatahotra izany e!” hoy i Malala sady mody nivazivazy nefa tena tsy andriny izay fotoana ahatongavan’i Tojo.
Toa nikoropaka tampoka izy, namboarimboariny ny molony, ny volony… tampoka teo anefa naneno sahady ny kiriokan’ny varavarana lehibe iraisana any ambany izy. “... sahady ve?” hoy izy nanontany. Tsy nisy namaly anefa. Afaka segondra vitsy dia nisy nandondona mora ny varavarany, taitra izy, i Mahefa ve izany? Tsia an! Dia ahoana? Nahilany mora ny varavarana, tosika somary mafy avy any ivelany anefa no nitsena azy, avy hatrany dia oroka tsy nifankahitana no nitsenan’i Tojo azy. Nampiakatra avy hatrany ny tsirim-pientanana tao anatin’i Malala ihany koa ny fahitana fa i Tojo no tao. Ankilany saika hanosika azy ihany ny tananany hoe aleo handeha miadana noho ny henatra kely nananany sao dia hoheverin’i Tojo fa dia tsy mahari-boa-kena eo tokoa, andaniny anefa, te hiroso haingana avy hatrany koa izy sao ho tonga tampoka i Mahefa, ka tsy ho vita izay tiany hatao.
Nahankin’i Tojo tamin’ny rindrin’ny lalantsara izy, nosarihiny hiakatra ilay akanjo mandry malama tohitena hatreo amin’ny lohalika teny amin’i Malala. Sady nosafosafoiny no nopondipondesiny ny fitombenan’i Malala roa, izy amin’io sady mitringa mba ahatakarany ny vavan’i Tojo, ity farany indray somary manondrika kely ny lohany. Nahankin’i Tojo taminy avy eo ny azy, somary notereny tamin’ny rindrina aza, nakasokasony sy nodiliridiliriny teo. Na dia henon’i Malala ho narary azy aza ny fikasokasokin’ny vy ny fehikibo tamin’ny kibony dia toa tsy nampaninona azy izany. Tsapany koa ny fidiridirin’ny filahian’i Tojo efa tena mila azy fatratra. Ningainy hisadika amin’ny valahan’i Tojo avy eo ny tongony havanana, ny tanany etsy namikitra tamin’ny sorony, ny vavan’izy roa ery ambony mbola mifampitohoka lalina, toa mifampikarokaroka foto-dela hatrany. Notakarin’i Tojo tamin’ny tanany avy ao aoriana ny zohim-pahafinaretan’i Malala izay efa notsiririrtiny fatratra. Somary natosiny ilay tady kely teo anelakelam-peny. Efa rakotry ny hamandoana tanteraka i Malala. Vao nahakasika ny azy i Tojo dia namihina mafy tampoka ny tanany tery ambony, vao maika moa natsofony lalina tany ny rantsan-tanany roa, naveziveziny tao, nahankiny tamin’i soron’i Tojo ny lohany, sady narahiny fisefoana miangoty makany ny tsirom-pahafinaretany tsy nisy ohatran’izany. Nifampijery kely izy roa nony avy eo sady nifanankalo tsiky. Tsy naharitra intsony i Malala fa tonga dia natosiny moramora i Tojo hamonjy ny varavarana iray hiditra ao an’efitr’i Mahefa. Somary sadaikatra ihany i Tojo, toa nanohitra ny vatany sady nosarihany ho ao an-dakozia i Malala. Nobatainy ity farany nony avy eo ary dia natombony teo ambonin’ny latabatra fihinanana. Saika hanakatra hamaha ny patalohany amin’izay i Malala nefa… natosiny handry tsimoramora, sady nifanorokoroka ihany izy roa. Avy eo i Tojo nidina moramora nanoroka ny tendany, somary nokaikikakeriny malefaka tamin’ny nify mihitsy aza. Nanaitaitra ny tsirim-panentanana tany anatiny tany ny halandilandy sy ny hanitra navoakan’ny hoditry i Malala. Ningain’i Malala ny fitombenany ary dia nalaky koa ny nanesoran’i Tojo ilay takokenatra teny aminy. Novelarin’i Malala ny feny nony avy eo. Nampiakarin’i Tojo haingana ilay akanjomandry maivana hoe eo amin’ny soroky Malala. Namonjy avy hatrany ny nonony indray avy eo ny tanany roa sady nanafosafo azy, ny vavany mitohoka eo afovoany, nampidininy namaky ny tratra’i Malala, nandalo ny ny kibony. Toa ela loatra ny fahatsapan’i Malala ny hetsiky Tojo ka dia natosiny tamin’ny tanany hidina ambanimbany malaky kokoa ny lohan’i Tojo. Dia ravo ninononono teo tokoa ny anao lahy. Ny feo avoakan’ny lelan’i Tojo mikasoka ny zohim-pahafinaretan’i Malala izay mando tsy nisy ohatran’izany sy ny sento arahin-kiaka sy monomonona mitaraina malefaka mipololotra ny vavan’i Malala no hany sisa re tsindraindray nandrava ny fahanginana tao andakozia:
- “tsara be leitsy a!................................. tsara!.......................tiako be izany……………….izany ataon’ialahy izany,…………zany………ay………….eo……………. aan!....................aaannn!.......................aaaannnnn!” Tonga tany amin’ny lafatra ny anao vavy. Nitraka i Tojo nony avy eo, nizaha ny endriky i Malala toa vizana tanteraka nefa tsy niasa firy akory. Nitsiky i Malala sady somary nolelafiny ny molony. Niariana faingana izy raha vao hitany ho namaha ny fehikibony i Tojo. Natosiny somary hihataka azy. Niala teo ambonin’ilay latabatra nisy azy izy dia namonjy nandohalika teo anoloan’ity vao avy nanome azy ny fahasambarana sady nanampy azy hamaha ireto bokotra efatra somary saotra novohana. Vao maika koa nananosarotra ny famahana azy anefa ny fihenjanan’ny filahian’i Tojo tao anatiny. Toa tsapan’i Malala ery izato angezany. Vao tafavoaka tao koa moa izy dia tonga dia nihinjitra nisompirana, toa nifanandrify avy hatrany tamin’ny vavan’i Malala. Raha iny Malala mbola nibika azy fatratra iny, dia … noraisin’i Tojo ny hatony, somary narosony ny lohany, moa izy koa nampandroso ny filahiany. Noleladelafin’i Malala tsara teo aloha ny an’ity farany mba ho vonton’ny hamandoana dia nampiharany ny fahaiza-manaony teo nony avy eo. Nosokafany molony ary dia nampidiriny moramora hatrany amin’ny faran’izay lalina ny an’ny Tojo...
Nigohan’i Malala avokoa izay tsiranoka rehetra nivoaka teo. Tsapany tokoa ny mbola maha tanora sy ny tsy maha-be vehivavy an’i Tojo, efa ho in-dimy nitelina izy vao nitsahatra ny fitsitratsitran’ny ranon’aina nivoaka tamin’ity tovolahy nanome fahafinaretana azy. Tamin’i Ratrema vadiny, sy i Hery sakaizany no nampitahany azy. Tena mbola tanora loatra tokoa i Tojo, raha eo amin’ny sehatry ny fitiavana. Tsikaritry Malala fa mbola tsy ampy ny traikefa ananany, eny fa na dia amin’ity izy somary maherihery setra sy maimaika aza. Toy izany koa ny mbola tsy nahaizany nitazona elaela ny tsy handehanan’ny tsirinainy. Na dia izany aza anefa tena nankafiziny, vaovao indray ity hoy izy. Toa vonona tampoka izany izy hampihatra ny fahaizany, hizara ny traikefa ananany, hampianatra an’i Tojo ny fahaiza-manaon’i Hery, ilay olona hany tena nahababo sy nahaketraka azy, mbola mahababo sy mahaketraka, ary mbola hahababo hahaketraka azy tanteraka, indrindra amin’ny fahaizany mitia.
Nitsangana izy, nifanorokoroka teo izy roa, nosarihin’i Malala ho any an’efitry Mahefa indray i Tojo. Tsy nandà intsony ity farany.
- “Tianao?” Hoy i Malala sady nanao fijery miangoty somary misompirana kely.
- “Tiako be,” hoy i Tojo
- “Dia mbola tianao?” Hoy indray izy sady nanala ny akanjomandry keliny.
Nahataitra azy avy hatrany indray ny fihetsiky Malala teo, nobedainy avy hatrany i Malala, saingy ity farany nanao hoe:
- “ Aleo aloha alako ny akanjonao e!” Nifanorokoroka indray izy roa. Nony niboridana tanteraka koa i Tojo dia nampandrian’i Malala tamin’ny farafara. Tsy ela, nihenjana be sahady indray ny filahian’ity tovolahy tanora. Nanindry tena anefa izy, niezaka ny niandry izay ho tohiny, i Malala mantsy no mitondra ny familiana. Nisafosafo tena teo anoloany teo aloha i Malala, avy eo niakatra hisoavaly azy avy eo ambony. Nanomboka nandroso nihemotra vetivety aloha i Malala dia najanony kely. Notohizany indray rehefa avy eo. Anjanony kely indray raha vao tsikariny fa ho tafakatra ambonimbony i Tojo.
- “Aza ajanona fa tohizo ka! kely sisa,” hoy i Tojo nony farany tsy naharitra. Nalefan’i Malala mafimafy amin’izay fa na izy aza efa nientana be ihany koa. Ny tanan’i Tojo koa manozongonzona ny fitombenany hanampy azy haingana amin’ny fivezivezena.
- “Zay! zay! aah! Tianao? Tonga aho, tonga aho Malala a! hhmmm! aaahhh!” nibaradaka ilay tovolahy, toa tsy tadidiny intsony hoe aiza no misy azy. I Malala koa anefa etsy andaniny toa marenina tsy maheno izay fibedibedin’i Tojo any akory fa namovokovoka mafy nitady ny fahafinaretana ho azy. Tsy ela akory:
- “aaaahhhh........ aahh....ahhhhouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.” sady nilofika nankany aoriana ny lohany” Nahatsiaro lafatra loatra ny tenany iray manontolo.